विश्व – Sarokar online
काठमाडौँ, २९ साउन । कोरोनाबाट संक्रमित भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई कोमामा राखिएको छ । केही दिनदेखि अस्पतालमा उपचाररत मुखर्जीको ‘भाइटल प्यारामिटर’ भने स्थिर रहेको बताइएको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सले दिल्लीस्थित सैनिक अस्पताललाई उद्धृत गर्दै मुखर्जी कोमामा गएको उल्लेख गरेको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआएको र भेन्टिलेटरमै उपचार भएको प...
एजेन्सी,२९ साउन विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन रुसपछि चीनले बनाएको छ । चीनले क्यानसिनो बायोलजिक्सले तयार पारेको भ्याक्सिनलाई सिमित परिणाममा मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । तीनले उक्त भ्याक्सिन चीनीयाँ जनमुक्ति सेनामा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । रुसले केही दिनअघि गामालेया रिसर्च इन्स्टिच्युटले तयार पारेको भ्याक्सिननलाई सर्व...
काठमाडौं ,२६ साउन भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूमा कोरोना संक्रमण भएको बताएका हुन् । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म भारतको राष्ट्रपति रहेका मुखर्जीले ट्वीट गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएका हुन् । मुखर्जीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल गएका थिए । परीक्षणका क्रममा उनमा कोरोना पोेजेटिभ देखिएको हो । htt...
नयाँदिल्ली : चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको एप्स टिकटकमा भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भारत र चीनको सीमा विवादले हिंसात्मक रुप लिएपछि भारतमा टिकटकसँगै अन्य ५८ वटा एप्स प्रतिबन्धित बनेका हुन् । तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ नै छन् । टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले विकास गरेको हो । छोटो भिडिओ बनाएर अभिनय गरिने टिकटक पछिल्लो समय युवा पुस्तामा अत्याधिक लोकप्रिय छ । यस कम्पनीले चीन सरकार...
काठमाडौं : कोरोनाका कारण विदेशी भूमिमा १ सय ३० नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा मृत्यु हुने २९ जनाको तुलनामा यो झन्डै पाँच गुणा बढी हो। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले १३ मुलुकमा रहेका नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको जनाएको छ। संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समिति संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यू...
७ असार, काठमाडौं । भारतमा एकैदिन कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का १५ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन् । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ४१३ संक्रमित फेला परेका छन् । यससँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि चार लाख नाघेको छ । अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या चार लाख १० हजार ४६१ पुगेको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म...
भुटानमा कसरी नियन्त्रण भइरहेछ कोरोना भाइरस ?
थिम्पु : कोरोनाभाइरस महामारी विरुद्ध सिंगो विश्व लकडाउनमा भएका बेला लोतेन जाङ्मो भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अप्रिल १३ मा ओर्लिएकी थिइन् । आफ्नो देशमा बस्न पाएको र राहत पाएको भए पनि उनी महामारीका कारण भविष्यमा हुनसक्ने विपदबारे चिन्तित थिइन् । २२ वर्षीया विद्यार्थी लोतेनले पन्जाव विश्वविद्यालय बन्द हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै महामारीबारे थाहा पाएकी थिइन् । त...
डब्ल्यूएचओले ब्राजिललाई भन्यो– कोरोनासम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नू
२७ जेठ, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कोरोना सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्न ब्राजिललाई अपिल गरेको छ । मृतकको वास्तविक संख्या लुकाइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला ब्राजिल सरकारले कोरोना भाइरसबाट समग्र संक्रमित र मृत्युको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । शनिबार ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको अहिलेसम्मको समग्र मृतक र संक्रमितको तथ्यांक हटाएर...
भारतमा गर्भवती हात्तीलाई पटाका खुवाएर मार्ने पक्राउ
नयाँदिल्ली : भारतको केरलामा एउटा गर्भवती हात्तीलाई मारेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन् । अरु केहीलाई सोधपुछ गरिएको छ । राज्यका वनमन्त्री के राजुका अनुसार प्रहरी र वन विभागका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले एकजनालाई पक्राउ गरेका हुन् । यद्यपि उक्त घटनामा अरु थुप्रै स्थानीयको संलग्नता भएको बुझिएको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार प्रहरीले घटनाले छानविन सुरु गरेको छ । छानविनका लागि ...